Nezvedu - Zhoushan Tanso Plastics Machina Co, Ltd.
ZhouShan Tanso Plastiki Machina Co, Ltd inyanzvi yekugadzira matanho ekushandisa emaindasitiri akavambwa muna1990.
Isu tinopa jekiseni kuumba, extrusion uye irabha nezvigadzirwa zvemhando dzakadai sereji, mbiya uye fung. Isu tinovimbisa kuramba tichishandisa nguva yedu nehunyanzvi mukukudziridza zvigadzirwa nokudaro tichigadzira kukosha kwakawanda kune vatengi.
TANSO yakunda kuzivikanwa uye kuonga kubva kune vatengi vedu vatengi vedu mushure mekutengesa masevhisi. PaTANSO, isu hatitarise chete pamusoro pehunhu hwezvigadzirwa zvedu asiwo nekushandisa chaichoicho. Yedu inhouse chengetedza vatengi timu inotevera nguva nenguva newe kuti uvimbise machinaries ari kushandiswa nemazvo kuwedzera kukosha kwechigadzirwa uye kuwedzera nguva yeupenyu. Kana pakagadziriswa nyaya yehunyanzvi, panguva yakakodzera, timu yedu ichakudzidzisa kuti upe nyanzvi dzekupfura zvinodikanwa.
1. technical suppert, zvinoenderana nezvakasiyana zvigadzirwa, tinokuwana iwe unonyanya kukodzera mhinduro
2. Ipa nyanzvi yekuisa pane kusarudzwa kwemidziyo
3. Dambudziko kupfura uye tarisa yakakosha nyaya kuvimbisa yepamusoro mhando mhedzisiro
Tanso ine iyo yepamusoro-soro yekugadzira nzvimbo uye kumusoro-kwemaini michina yekugadzirisa kuti isangane chaizvo zvinyanzvi zvinodiwa pane imwe neimwe zvigadzirwa. Nzvimbo yedu inosimbiswa ne ISO9002